Isithembiso seZulu Esiqinisekisiweyo
Ibonwe kangaphi 21 (Ama)Ixesha #Ubawo #Umama
“IBandla likaThixo” liqinisekisiwe uBukumkani bamaZulu
UThixo uqinisekisa uBukumkani bamaZulu njengomlamli woMnqophiso Omtsha (iPasika) kwaye ukhokelela uluntu ekuphumeni kokungaqiniseki kwikamva elikhuselekileyo nelikhanyayo. NgokweBhayibhile, uThixo uyiqinisekisa kwiBandla likaThixo kuphela.
Igama Elitsha likaYesu kunye negama leYerusalem eNtsha, eliboniswe kwiSityhilelo sikaYohane
Njengoko siphila kwiLixa likaMoya oyiNgcwele, ukholo lwethu kunye nengqondo yethu akufuneki zihlale kwiLixa likaNyana. IBhayibhile iyangqina ukuba ukukholelwa kuKristu Ahnsahnghong kunye noThixo uMama, abaxolele izono zethu ngePasika yoMnqophiso Omtsha, yindlela yokuqinisekiswa uBukumkani bamaZulu kweli xesha.
“Lowo weyisayo ndiya kumenza intsika etempileni yoThixo wam…ndaye ndiya kulibhalela phezu kwakhe… negama lomzi woThixo wam, iYerusalem entsha, ehla emazulwini ivela kuThixo wam, negama lam elitsha.” ISityhilelo 3:12
UKristu Ahnsahnghong, iMvana yePasika yoMnqophiso Omtsha
Iziprofeto & Kristu uAhnsahnghong